Amathiphu ama-3 Wokwenza i-imeyili Elungiselelwe Iselula Martech Zone
Ngaphambi kokuthi uqale unqume ukuthi ungayakha kanjani i-imeyili elungele ukuhamba nomakhalekhukhwini, kufanele uzibuze ukuthi “Abamukeli bakho basebenzisani ukubuka i-imeyili yakho?” uma unquma ukuthi kunesidingo se-imeyili elungiselelwe iselula, ke sekuyisikhathi sokuqala ukubheka ukuthi ungakwenza kanjani ukukudala.
Nawa amanye amathiphu wokwenza ama-imeyili alungele amaselula emikhankaso yakho ye-imeyili.
Amadivayisi eselula athanda ukusika imigqa yezihloko ze-imeyili kufushane ngezinhlamvu ezi-15. Nakanjani wazi lokhu lapho udala leyo migqa yezihloko ehehayo yabafundi.
2. Ukuhlelwa Kwe-imeyili.
Ngokufana nezakhiwo kuma-imeyili, ukwakheka kwe-imeyili yeselula kungafaka izinto ezahlukahlukene - yonke indlela isuka kubukhulu kuye kuzixhumanisi. Isikrini esikumakhalekhukhwini kusobala ukuthi sincane, ngakho-ke cabanga ngalokho lapho udala i-imeyili yakho. Thola ukuthi izithombe zizonikela ngokufanele kuwo wonke amadivayisi eselula. Uma kungenjalo, mhlawumbe kufanele ufake umbhalo owengeziwe esikhundleni salokho. Futhi-ke khumbula: iminwe enonile emafonini amancane, lapho udala izinkinobho nezixhumanisi!
3.Vivinya, vivinya, vivinya!
Siyaligcizelela leli phuzu ngaso sonke isikhathi lapho sixoxa ngezindlela ezinhle kakhulu zokumaketha ama-imeyili noma kunjalo, ngakho-ke sifuna ukuqhubeka nalo mkhuba omuhle uma senza nama-imeyili alungele amaselula. Ngaphambi kokuthumela kwababhalisile, qiniseka ukuthi uyihlolile i-imeyili yakho ukuqinisekisa ukuthi inikezela kahle.
Tags: ImikhankasoUkukhangisa OkuqukethweimeyiliUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiimigqa yezihlokotest
Feb 20, 2012 ngo-11: 17 AM
Ngibonile ukuthi ama-smartphones amaningi azosondeza okuqukethwe uma nje kufomethwe kahle - esimweni se-imeyili, ngicabanga ukuthi lokhu kufezwa ngamatafula namakholomu. Uma umzimba we-imeyili yakho ukwikholamu eyodwa nebha eseceleni kwenye, kubukeka sengathi usondeza kahle uma uthepha kabili isikrini sakho ukuze usondeze isithombe. Nokho, kwesinye isikhathi ifonti iba ncane kwamanye ama-imeyili, ayisizi. Gcina amafonti wakho ngosayizi omuhle bese ufometha ikhasi lakho ukuze uthole izindlela ezinhle kakhulu ze-imeyili!
Feb 20, 2012 ngo-11: 20 AM
Angikaze ngibe ngumuntu othanda ukufunda noma ukuphendula i-imeyili ocingweni 😉 ngicabanga ukuthi ezinye izinto zifanelwe okuthile okufana nekhompyutha kufanele ucingo, esikhundleni se-imeyili.
Feb 20, 2012 ngo-11: 24 AM
Ngokweqiniso angazi ukuthi ngingakwazi yini ukuphatha ivolumu ye-imeyili engiyitholayo ngaphandle kokubuyekeza nokuhlunga ocingweni.
Feb 23, 2012 ngo-11: 21 PM
Noma kungahle kungabi sohlangothini lokudala, ngingeza… isilinganiso, isilinganiso, isilinganiso! Linganisa imikhankaso yakho bese uyihlole i-A / B ukuze ubone ukuthi isebenza kanjani futhi ulungiselele i-imeyili ngayinye elandelayo ngokumelene nokuthi amamethrikhi akho akutshela ini.
Ngo-Apr 13, i-2012 ku-6: 01 AM
Amanye amathiphu amahle lapha…
Ngicabanga ukuthi kubalulekile kubakhangisi abazimisele ngokuqhuba imikhankaso ephumelelayo ukungayinaki ipulatifomu yeselula.
Kunanini ngaphambili, abantu basendleleni futhi bahlala bevuselelwa ngama-smartphones abo.
Ngokuvamile, kunamathuluzi amahle wokusebenzisa ama-imeyili futhi.
Enye yezintandokazi zami iyithuluzi (lamahhala) elibizwa ngeXmailWrite. Ngisanda kwenza okuthunyelwe ngakho, okungahle kuzizuzise wena noma abanye okwenzeka badlule.
Nasi isixhumanisi sokuthunyelwe kuvidiyo / kubhulogi: http://www.multiplestreammktg.com/blog/your-new-secret-weapon-for-writing-e-mails/
Hlanganisa Umphathi Wezokumaketha